Miseve inotungamirira chirwere ine ramangwana: Martin Vrijland
Miseu inotungamirira chirwere ndeyemangwana
Akaiswa mukati HEALTH	by Martin Vrijland	pana 9 February 2016	• 5 Comments
Zvinenge zvisingabviri kutenda kuti virusi yekaka inonyanya kutyisa hutano hwevanhu. Zvinyorwa zvepamusoro zvakare zvinoratidza zvakare kuti simba rekudzokorora rinoita kuti iwe uzvitende. Zvisinei, inogona kunge yakavharidzirwa nemhosva yekupora yakaitwa muBrazil, uko vakadzi vane pamuviri kubvira 2015 vaitofanira nayo Chirwere cheTdap kuti vachengetwe. Asi nokuti nhema inodzokororwa kakawanda uye kune mharidzo yakavimbika zvikuru iyo inowedzerwa kwauri nevanokuverenga nhau vanovimbika mune sutu yakanaka, tinoona zvakafanana nemamwe ose anoparadzira evhidhiyo; iwe unopa kuzvipira. Izvo zvichava zvokwadi. Tinofanira kunyanya kutya. Unoziva here zvaunofanirwa kutya? Kune avovo venhema venhau dzemashoko iwe unogara uine chokwadi. Kana kuti panzvimbo yevatenzi vavo uye vezvematongerwe enyika vanozviita nemaune vachikunyengera. Asi icho parutivi.
Utachiona hwekare ndeweimwe monkey yempini inosangana nemitemo yese ye propaganda. Uye zvichida mumwe ane chinangwa nekutyisidzira uku kunotyisa. Zvichida huwandu hwenyika huri kumanikidzwa kuisa zvirongwa kubva kune WHO (World Health Organization). Zvisinei, kunewo mukana wekuti kutyisidzira kwehutachiona kuchashandiswa kusimbisa kupindira kwakasimba kwokuti sangano reWest NATO harina kunaka. Iwe unofanirwa kufungidzira nyika dzakadai seBrazil uye Venezuela. Brazil ndiyo 1 yenyika dze BRICS, umo Russia pamwe chete yakagadzira imwe nzira pamabhanki enyika. Uye Venezuela mabheti mafuta, asi haadi chaizvo kutamba kumapopu eMelika.
Iye zvino unogona kubvunza mubvunzo uyu: "Chii chakashata nemishonga inokonzerwa? Izvozvo zvakanaka chete? Iwe haudi chero hutachiona hwehutachiona hukuru?"Ipapo iwe hauna hanya nemubvunzo wekuti pane chokwadi chiripo chemahombekombe makuru ehutachiona here kana kuti izvi zviri kungove zvichinyanyiswa nevarume vari kumusoro. Asi pakupindura mibvunzo yako. Mishonga ndiyo nzira yakakwana yokuputira muviri wako nejoro iwe unofanira kufungidzira kuti hapana mairi mukati mazvo kupfuura zvinonzi ndeyo mairi. Mukuwedzera, ivo vaiwanzobuda iyo inodhazvakadai se mercury inogona kuchinja ubongo hwako. Asi zvichida pane zvakawanda muzvirwere izvi kupfuura zvatinofunga kufunga mumarota edu akaipa. "Hongu, ikozvino iwe uri kutya iwe pachako!"Kwete, ndiri kuedza kukuita iwe. Iwe unogonawo kuzvirega. Vamwe vanhu vanoda kugara nemisoro yavo mujecha. Izvo zvinobvumirwa. Fungidzira kuvhara nanotechnology mune idzodzo zvirwere zvinokonzera uropi yako neDNA yekugadzirisa kubva kunze? "Chii? Nanotechnology? Chii ichocho? Haana kumbozvinzwa nezvazvo."Gozozo, zvichida unofanira kuisiya nenzira iyoyo. Usafungisisa zvakanyanya uye uvimba kuti amai ndivo vakanakisisa newe. Markt Rutte ndeyechokwadi; kufanana nevamwe vezvematongerwo enyika. Havaiti iwe fly zvakaipa!
Iyo teknolojia iri kutowedzera zvakawanda kupfuura iwe unofunga. Genetic manipulation yezvisikwa zvipenyu hazvisi zvitsva zvakare. Kudzokororwa kwemajeni kana maitiro muzvisikwa chimwe chinhu chiri chikamu chesainzi. Nanotechnology uye ICT zviri pedyo zvikuru uye 2013 yakanga yakwanisa kukwanisazve kuvaka masero matsvuku eropa ayo aigona kubata 20x yakawanda oksijeni. Icho hachisi nhema, kuti mukuru wezvigadzirwa zveGoogle anonzi Ray KurzweilIko panguva iyoyo.Nenotechnology iwe unogona kuchinja zvisikwa zvakakura, nokuti iwe wakakwanisa kuzvidzora mu laboratori kana wakaronga maitiro echisikwa chipenyu. Icho chinouya nekutongwa uye kukanganisa, asi iwe haufaniri kushamiswa kuti mhuka dzinorarama dzichakurumidza kubuda kubva muchina wepasita ye 3D.
Muna 2010, masayendisiti eJapan akabudirira pakuvaka utsi hwaidiwa mumitumbi yavo ita chirwere. Muchiitiko ichi chaive chirwere chemalaria. Zvechokwadi izvi zvakarewo mharidzo inobva mune zvemashoko makuru uye iwe unganetseka kuti sei ini ndinotora shoko rakadaro zvakanyanyisa. Zvakanaka, izvi zvine chokuita nekuti ndakanyatsozviisa mumanotechnology uye pamwe chete nedzimwe sciences, kuitira kuti zviitiko izvi hazvisi chinhu chine chinangwa chekushanduka-shanduka.
Kutya kukuru kwaunofanira kuva nako hakusi kutya maropa, asi kutya hurumende. Hurumende inokupa ruzivo rwemashoko nezvehondo uye kutya; iwe urombo unoparadza uye uise hutachiona hunopinda mumamiriro ezvinhu. Nyika yakakura yakabatikana kuunza vanhu pasi pechigaro chevaranda vane chisimba, uye havatyi kushandisa zvose zvingave zvigadzirwa zvemichina yeizvi. Iwe unogona kufunga nezve chemtrails ine nanoparticles inoshandura kuva nanobots mumuviri wako. Iwe unogona kufunga nezvekugadzirisa. Iwe unogona kufunga nezvezvirwere. Mukuwedzera, michina dzisina kushandiswa dzinoshandiswa kuisa izvi mumuviri wako semugumisiro weiyi nanotechnology kutumira / kugamuchira - inogadzirirwa kubva kure. Iko kashandisi yemazuva ano haisi uketani pamutsipa wako. Kunyange zvazvo mari iriwo musungo wevaranda, munharaunda ino yemazuva uye kubviswa kwemari kunewo kune ngozi kuna ani zvake asina kuwirirana kune vanhu vepasi rose, njodzi huru kune yekubatanidza muviri wevanhu nehuropi hwevanhu kuInternet. . Pasina kuzivei, iwe uchashandurwa uchinje. Unogona kuzvienzanisa nezita rekushanda kwefoni pafoni yako. Uye kana iwe uchibvumira nheyo mumuviri wako, nokuti iwe unotya chirwere kana chirwere, unoita kuti zvive nyore kwazvo kuti boka guru rekutonga rive mujenya iyi teknolojia mumutumbi wako. Uye kana iwe uchifunga zvino: "Aiwa munhu, kana iwe ukanyora chimwe chinhu chakadaro iwe unopenga! Tarisa mafirimu akawanda kwazvo!", Izvozvo zvingave zvakanyanya rugare. "Sei iwe ungazvidya mwoyo? Chero bedzi isu tine chikafu chakanaka uye tine doro pavhiki, hakuchina chakaipa here?"Hongu, zvichida iwe wakarurama. Chero zvazvingava, kutyisidzira kune vanotyisa yakaita utachiona kuchava chikonzero chakakwana kuti vazhinji vabvumire tsono mumutumbi wavo. Ndinoti zviite!
Source chinyorwa listings: telegraph.co.uk
Zika utachiona hwehutachiona iye zvino zvakare kuburikidza nekubatana kwepabonde
Zvakadini kana nanotechnology uye huchenjeri hunoita kuti urege kufa?
Tags: Featured, manipulated, genetic, Mug, utsi, muscito, nanotech, nanotechnology, kutungamirira, mushonga, vaccines
Mutongo wokupedzisira wepikisano ndewokuti: "Ndinotaura", ihwokupedzisira kugumisa iwe
asi zvichida zvinorehwa, kwete !, izvo zvinofanirawo kuratidzwa: Usaiti,
Pasi, pasina nguva muChirungu tsanangudzo yakanaka
Vanoita ruramisiro muzviso zvedu, tangotarisa zita ravakapa mhutu:
Zvakare zvakare tsanangudzo yeTELEAC kubva kuna Dr. Sean Hross:
Treowd akanyora kuti:
Kushandurwa kwako kwekare maererano neZika chirwere chepachipatara maererano nekupora kwaiva Martin,
pamagumo e2014, vakadzi vane pamuviri muBrazil vakafanirwa kupora chirwere.
Zvirwere zveTdap ZveVasikana Vose Vari Kuberekera muBrazil Vanotarisirwa Muzororo 2014
rmstock2 akanyora kuti:
Dr. Bill Deagle - Zike Virus Kutya Kukura
« Hondo yokurwisana uye kuwedzera kwekutambudza muSiria
Research Council (OVV) inogamuchira maMacavelliprijs emhando uye kunyengera kweMH17 report »
Kushanya kwakazara: 2.498.729